वास्तवमा ब्रिटिश शाही परिवारको रूपमा एक रगतको उरुसुला वान ड्रे लेईन (भविष्य इकाई अध्यक्ष) हो? मार्टिन भिजल्याण्ड
वास्तवमा ब्रिटिश शाही परिवारको रूपमा रगतको उरुसुला वान ड्रे लेईन (भविष्यको ईयू अध्यक्ष) हो?
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	4 जुलाई 2019 मा	• 20 टिप्पणिहरु
तपाईं शायद ज्ञात प्रसिद्ध विन्स्टन चर्चिल उच्चारण: "इतिहास विजेता द्वारा लिखित छ।" नयाँ यूरोपीय संघका अध्यक्ष उरुसोल वान ड्रेनेन मा केहि वंशावली अनुसन्धान गरौं; तपाईं जान्दछन् कि लोकतान्त्रिक चयन गरिएको महिलाले अचानक फ्रान्स टिममर्मनबाट लक्षित ठाउँ लिन अनुमति दिएको थियो। यो कुनै संयोग छैन कि Ursula वान ड्रेनेन यूरोपीय संघ को नयाँ राष्ट्रपति हुनेछ। त्यहाँ संकेतहरू छन् जुन उनी महानगर रगत वोन सकसेन-कोबर्ग र ग्वाटाबाट हो भनेर संकेत गर्न सक्छन्; ब्रिटिश राजकीय परिवारको रूपमा यही खून।
घर साक्सोनी-कोबर्ग र गोता (सक्सोनी-कोबर्ग-गोवा) मूलतः एक जर्मन राजवंश हो जसका सदस्यहरूले विभिन्न युरोपेली देशहरूमा शासन गरे। राजवंश Saxony-Coburg-Saalfeld (Wettin को घर देखि) को डुक्के घर से उत्पन्न हुआ, जो 1826 में Saxony-Coburg और गोवा की डबल-डच अधिग्रहण की। XNUM-X शताब्दीमा, यो रेखाचित्रबाट सन्तान विभिन्न देशहरू दिइएको थियो। 19 मा, राजा जर्ज वीले ब्रिटिश शाही परिवार को नाम विंडसोर मा बदले। नतिजाको रूपमा, ब्रिटिशहरूले बिर्सिएका छन् कि उनी गोपनीय रूपमा जर्मन शाही परिवार (जस्तै नेदरल्यान्डजस्तै) ले शासन गर्छन्। यो अब लाग््छ कि ईयु अब एक नै महान खून को हात मा निश्चित रूप देखि छ।
वैसे, म जोरन चाहन्छु कि यो लेख केवल संदेह व्यक्त गर्दछ, किनभने Churchill को अधिकतम निश्चित Google मा लागू हुन्छ। हामी पुरानो समाचार पत्रहरू वा किताबहरू हेर्नका लागि अब पुस्तकालयहरूमा जानुहुँदैन, तर Google सबै जानकारीको स्रोत हो। कुनै पनि अवस्थामा, म यस उल्लेखनीय माध्यमबाट यस उल्लेखनीय महिलाको लागि पहिलो आवेग दिने आशा गर्छु जसको अन्तिम नाम वास्तवमा अल्ब्रेच (अन्तिम नाम बुबा हेर्नुहोस्)। सम्भवतः तल तल ढुङ्गा सतहमा आउँछ वा यो मेरो सम्मोदन गलत छ जस्तो देखिन्छ:
Ursula वान ड्रे लीन वास्तव मा Ursula Albrecht भनिन्छ र एक पुराना शाही राजवंश (एक फार्न रक्तलाइन देखि)
हामी Google मार्फत पत्ता लगाउन सक्छौं कि उरुसुरु अर्नस्ट कार्ल जुलियस अलब्रेचको छोरी हो। यो सम्पूर्ण परिवारको रूख जाँच गरौं। म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छ कि सम्पूर्ण पेनिग्रेरी जाँच गर्न लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नुहोस्।
अर्नस्ट कार्ल फ्रिड्रिड कार्ल अलब्रेचको छोरा थियो, मा जन्मे मार्च 28 1902। त्यो बेटा वानको अर्को छोरा हो जर्ज सिकंदर अल्ब्रेच en मैरी लेडसन अल्ब्रेच (समान रक्तलाइन भित्र विवाह शाही, महान, फेरोनिक रक्तचापको संसारमा सामान्य छ)। जर्ज अलेक्जेंडर अल्ब्रेच एक मोड मा एक छोरा हो जर्ज एलेक्स। Albrecht en लुइस अल्ब्रेच (यो अल्ब्रेच incest रह्छ)। त्यो एलेक्स अल्ब्रेच भ्यानको एक छोरा हो कार्ल फ्रान्ज Georg von von en Kath। अल्ब्रेच (जयनीय), कि पिता को लागि एक उल्लेखनीय नाम, किनभने यस कार्ल फ्रान्ज Georg von Knoop एक अल्ब्रेच को एक महान पोर्टल हो (त्यसैले उनको दादाले शायद उपनाम बदल्यो)। तिनको पिता कार्ल फ्रान्ज जर्ज वान नूप थियो र तिनका पिता फ्रान्ज अगस्ट हेनिरिक वान नूप थियो। उनको पिता अन्ततः फेरि जोबिन फ्रिड्रिच अलब्रेच एक अल्ब्रेक थियो।
यदि हामी Geni.com वेबसाइट मा रगत को अध्ययन गर्छन, हामी देख्न सक्छौं कि वोन Knoop वास्तव मा अल्ब्रेच को लागि एक नै परिवार को नाम हो। कहिलेकाँही यो वोन नूप हो र कहिलेकाहिँ अल्ब्रेच। त्यो परिवार "शाही रगत" हुन सक्छ र दाऊदको तारा र परिवारको छातीमा शेर राख्छ। यही शेर जुन हामीले सुन्तलाबाट जान्दछौं।
अल्ब्रेच नामको रूपमा हामी साँच्चै नामहरु स Saksen-Coburg र गोथको साथ समाप्त, जुन वेबसाइटमा फेला पार्न सकिन्छ। 4crests.com। यहाँ त्यस वेबसाइटबाट एक उद्धरण छ:
यो व्यापक अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी कातालान, इटालियन, स्पेनिश र हङ्गेरियन नाम मूलतः एक जर्मनिक व्यक्तिगत नाम एल्ब्रेचेट बाट व्युत्पन्न भएको थियो, जुन तत्वहरू एडीएटल (नोबल) र बर्हट (उज्ज्वल र प्रसिद्ध) देखि बनाइएको थियो। यो सबै भन्दा साधारण जर्मन नाम दिइएको नाम हो, र विभिन्न मध्ययुगीन राजकुमारहरू, सैन्य नेताहरू र ठूलो चर्चकहरू, विशेष रूपमा प्रागका सेन्ट अल्बर्ट (चेक नाम वोजटेक, लैटिन नाम एडिलबर्टस), जो बोमेनियन राजकुमारले 997 मा शहीदको मृत्यु भएको थियो। प्रिस्सीहरूलाई ईसाई धर्ममा रूपान्तरण गर्ने प्रयास; सेन्ट अल्बर्ट द ग्रेट (? 1193-1280) अस्टिस्टलालियन धर्मशास्त्र र थमस एक्विनासका ट्यूटर; र अल्बर्ट दियर (एक्सएनएमएक्सएक्स-एक्सएनएक्स) ब्रान्डेनबर्ग को मार्गी। इङ्गल्याण्ड, स्कटल्याण्ड र फ्रान्सका देशहरूमा धेरै युरोपेली उपनामहरू थोरैसौं र चौथो शताब्दीमा बनेको थियो। यस प्रक्रिया केही अघि सुरु भएको थियो र केहि ठाउँहरूमा 1100 सताब्दीमा जारी रह्यो, तर सामान्य छ कि दशौं र ग्यारहौं शताब्दीका मान्छेहरू उपनामहरू थिएनन्, र पन्ध्रौं शताब्दीको अधिकांश जनसंख्याले दोस्रो नाम हासिल गरेको थियो।
त्यहाँ अल्बर्ट आई (1255-1308) नामको धेरै उल्लेखनीय छन् जसले जर्मनीको राजा रुडोल्फ आई वा हब्सबर्गको छोरा थिए। उनले जर्मनीको राजा चुनेको अडिफोर्ड नासाव के विरोध में, जिसे उन्होंने फिर से पराजित किया और गॉलहेम (1298) में युद्ध में मारे गए। उनीहरूले राजतन्त्रको शक्तिलाई पुनर्स्थापना गर्न र चुनावका राजकुमारहरूलाई कम गर्न उत्प्रेरित गरे, तर उनीहरूको बेपत्ता भित्री जॉनले नदी रिसे पार गर्दा हत्या भएको थियो। अल्बर्ट, रानी विक्टोरिया को राजकुमार कंसर्ट (1819-61) कोबर्ग नजिकै Rosenaux कैसल मा जन्मे। उहाँ सक्स-कोबर्ग-गोवाको ड्यूकको छोरो छोरा हुनुहुन्थ्यो। 1840 मा उनले आफ्नो पहिलो चचेरे भाई, रानी विक्टोरियालाई विवाह गरे जो एक विवाह जो आजीवन प्रेम प्रेम बनेको थियो। उनलाई 1857 मा प्रिन्स कन्वर्टको शीर्षक दिइएको थियो। उनीहरूको विवाहमा उहाँ प्रभावकारी रूपमा रानीको निजी सचिव हुनुहुन्थ्यो। उनको जर्मन कनेक्शनको कारणले गर्दा मन्त्री अविश्वास र सार्वजनिक गल्तीहरू, उनको राजनीतिक प्रभाव सीमित भए तापनि उनको सल्लाह सामान्यतया बुद्धिमानी र टाढाको थियो। उहाँले 1861 मा मृत्यु भएको वा टाइफाइड गर्नुभयो, उनको विधवाले लामो समय वा विच्छेदको अवसर दिन थाले। 1871 मा उनको मेमोरीमा केन्सेन्सन गार्डनमा अल्बर्ट मेमोरियल निर्माण गरिएको थियो।
अरुसोला वान ड्रे लेइनन वास्तवमा एक अल्ब्रेच हो; उनको रगत अल्ब्रेस्क छ, जुन ADAL (महान) र बर्हट (उज्ज्वल र प्रसिद्ध) को लागि खडा छ। Ursula को आमा geni.com द्वारा 'निजी' मा राखिएको छ, तर अल्ब्रेच (कहिलेकाहीं वोन Knoop) परिवार को सम्पूर्ण इतिहास दिए, हामी वास्तव मा मान सकते हो कि यो पनि एक Albrecht या वोन Knoop (एक र एक नै खून) ) थियो। सम्पूर्ण इतिहास 'परिवारमा दौडिँदै' (वा 'इन्सेस्ट') को प्रमाण दिन्छ। यसको अतिरिक्त, त्यहाँ कुनै पनि कारण छैन कि उरुसोला को उपनाम वोन ड्रे लेभिन हुनु पर्छ, किनकी उनको पिता अल्ब्रेच राम्रो तरिकाले चलाएको थियो। यसकारण उरुसुले आफ्नो उपनाम बदलेका छन्।
वेबसाइट 4crests.com को वर्णन बाट हामी स्पष्ट रूपले देख्न सक्छौं कि यो अलब्रेच परिवारले ब्रिटिश शाही परिवारसँग जोड्न सकिन्छ जुन यूहन्ना अल्बर्ट (एक अल्ब्रेच) को बीच विवाह गरेर जुन उनको चाचा - ईश्वरलाई मनमा राख्नुहोस् - अल्बर्ट मैले मारे) र रानी विक्टोरिया। यो जॉन अल्बर्ट सक्स-कोबर्ग-गोवा क्षेत्रको ड्यूकको एक छोरा थियो र यसैले अल्ब्रेस्चर भनिने पारिवारिक रेखाबाट आउँछ। अल्ब्रेस्चर वा अल्ब्रेच यही परिवार हो वोन सकसेन्स-कोबर्ग र गोवाको रूपमा। त्यसैले यूसुलाले ब्रिटिश शाही परिवारको रूपमा यस्तै रगतको जस्तो देखिन्छ! रक्तचाप दुवै वास्तव मा सैक्सन कोबोर्ग र गोता क्षेत्रहरु देखि उत्पन्न हुन्छन् र यसैले गोपनीय रूप देखि अल्ब्रेच को।
यदि तपाईं उरुसुलाको दर्शनलाई हेर्नुहुन्छ भने, उनी साँच्चै वर्तमान रानी एलिजाबेथको छोरी हुन सक्थे। हामी निश्चित रूप देखि अनुमानित हुन जाँदैछन, तर यो स्पष्ट छ कि तिनी महानगरीय रगत रेखा अल्ब्रेच (अल्ब्रेस्क - वोन नूप) बाट आउछन्। र हामी मात्र सोच्न चाहन्छौं कि ईयुको लोकतान्त्रिक हो कि ब्रेक्सिट ईयूको हानिको नेतृत्व गर्नेछ। होइन, यो सबै लोकतान्त्रिक रूप र ध्रुवीकरण र अराजकताको खेल हो, जसबाट महानगरीय रक्तचापहरू उनीहरूको फारानिक टाइम्सबाट क्रम सिर्जना गर्न सफल भए। एक रानी ब्रसेल्स को सिंहासनमा आइपुग्छ र उनको नाम अल्ब्रेस्क / अलब्रेल्ट रक्तचाप देखि उरुसुला हो: उरुसुला अल्ब्रेच।
स्रोत लिङ्क सूची: wikipedia.orggeni.com 4crests.com
4 महिनाहरूमा डच निर्वाचन परिणामहरू दाँयाबाट बायाँ टिममर्मनसम्म? मतदाताहरूलाई धोका दिने!
डोनाल्ड ट्रम्प र हिलारी क्लिंटन दुवै फिरऊन सन्तानहरू?
इिन पीपुल्स एनि रीच इइन फ्यूरर वा युएसई मात्र?
ब्रेक्सिट र युरोपको लागि योजना बनाई अराजकता
ट्याग: adel, महान, मूल, Alberech, Albrach, रगत, bloodlines, बेलायत, FRANS, वंशावली, geni, गोवा, रानी, शाही परिवार, Saxe-Coburg-Gotha, परिश्रम, Timmermans, Ursula von der Leyen, भिक्टोरिया, वोन सकसेन-कोबर्ग, विंडसर
4 जुलाई 2019 मा 13: 33
रोचक पुस्तक अर्मी-गोता भनेको महानगरीय परिवारहरूलाई भनिन्छ। ग्वाताले यसको विपरीत गथ्रिक मूलको अर्थ बुझ्दैन। गलत नाम सामान्य जनसंख्याबाट वास्तविक पृष्ठभूमि लुकाउन सुरूबाट प्रयोग गरिन्छ।
4 जुलाई 2019 मा 14: 28
यो "म जर्मनी रगतबाट हुँ" राम्रै नजिकको 😀, तर त्यहाँ अवश्य कुनै पनि समन्वय छैन र तपाईंको मत गणना गर्दछ। के तिनीहरूले अझै माछाको अर्को तिर माछा माछाको लागि तालाब छ? समाजवादी अभयारण्य एक तथ्य हो, अभ्यास सुरु गर्न को समय ...
4 जुलाई 2019 मा 15: 56
इङ्गल्याण्डमा राम्रो उडानहरू, हामीले त्यो अघि कहाँ देखेका छौं ..
उरुसुलाको बुबा अर्नस्ट अल्ब्रेच - त्यसपछि लोअर साक्सोनीको प्रधानमन्त्री र एक समूहको अनुमोदित शत्रुहरू - उनीहरु 19 उमेरको लन्डनमा पठाइएका थिए, जहाँ उनले एलएसईमा गलत नाउँ रोज गुडसनको अध्ययन गरे र स्कटल्याण्ड यार्डको संरक्षणमा पढे।
उनीहरूले surname Ladson चुनेको कारण यो दक्षिण क्यारोलिना, अमेरिकाको उनको महान मातृभाषाको नाम थियो, र गुलाब रोजिएको थियो किनकी उनलाई उपन्यास Roschen लाई बच्चाको रूपमा दिइयो।
4 जुलाई 2019 मा 15: 30
हिटलरले युरोप सफल भएन, तर अन्तमा उनीहरूको बाटो छ।
7 जुलाई 2019 मा 11: 32
रेकर्डको लागि, यो जर्मन रक्त र जर्मन छैन जुन युरोपमा सेवा पुर्याउँछ। वास्तविकतामा उनीहरूका 'जर्मन' नामहरू छन् किनभने उनीहरूले लामो समयसम्म जर्मनीमा बस्नुभएको छ र 'जर्मन' नामहरू स्वीकृत गरेका छन् जुन जर्मन साधारण आबादीको बीचमा रहन सक्दैनन्। शुद्ध रणनीतिहरू।
13 अक्टोबर 2019 मा 00: 27
De naam Albrecht doet me denken aan Albright als in (((Madeleine Albright)))
4 जुलाई 2019 मा 17: 18
विकिपीडियामा मैले पढें कि त्यो विवाहित एक वोन डेर लुईनसँग विवाह भएको छ, जसले उपनामको वर्णन गर्छ।
4 जुलाई 2019 मा 18: 58
हो, सही छ, तर अधिकांश समय तपाईं मानिसको अनुमोदित उपनाम पछि आफ्नो जन्म नाम पनि बताउनुहुन्छ। जसरी पनि उनको उत्पत्ति रोचक छ। अब मैले देखेको छु कि अल्ब्रेच नाम कम्तिमा जर्मन विकिपीडियामा छ।
4 जुलाई 2019 मा 19: 51
निश्चित रूपले एक अत्यन्तै तीव्र लेख छ कि फेरि फेरि हामी के पहिले नै जान्दछ भनेर पुष्टि गर्दछौं; हामी एक जना परिवारका हातमा परेका छौं (जसलाई उनीहरूले सुझाव दिएका छन्) मानिसहरूको भलाइको लागि कुनै आँखा छैन, तर केवल उनीहरूको आफ्नै स्थान र शक्तिसँग सम्बन्धित छन्। (र कोरहरू पार गर्दछन्)
4 जुलाई 2019 मा 22: 10
विन्डसर्सको एक ताजा सभ्य परिवारले यो कुरामा केही गलत छैन। निगेल फरेज एडवर्ड VIII जस्तै संदिग्ध ढंग देखि देखिन्छ, तर त्यो विशुद्ध रूप देखि संयोग हुनेछ, रोमनभको उल्लेख छैन
4 जुलाई 2019 मा 22: 11
4 जुलाई 2019 मा 23: 32
सबै सबै अचम्म नहोला कि तिनीहरू सबै परिवार हुन् र एकैछिन जस्तो देखिन्छन
5 जुलाई 2019 मा 13: 18
उनी नवजातसँग कफी आउन चाहन्छन्।
5 जुलाई 2019 मा 12: 02
एक पल्ट एक पल्ट एक पल्ट अल्ब्रेच थियो ... छाप को लागि कि Albrecht यति महान र राम्रो र सामान छैन?
नियन्त्रणमा रहेका आरएफए
5 जुलाई 2019 मा 13: 13
यहाँ एक जीडीआर, टाढाको परिवारबाट?
अल्ब्रेच एक अरबीटरफिलिमी इम रुउजब्यट देखि उत्पन्न हुन्छ। केहि मोनेट नच सेनर Ausbildung जू Schlosser ले भन्यो कि डेर डे Zweiten Weltkriegs zur Luftwaffe डेर वर्ममचt।
7 जुलाई 2019 मा 22: 37
अल्ब्रेचेजहरू एक धनी इतिहास छन्, होइन कि तिनीहरू सबै सम्बन्धित छन्, मात्र एक तथ्य होइन
5 जुलाई 2019 मा 20: 38
गेटिया पनि एक पुस्तक हो जसको साथ राक्षसहरुलाई निम्तो दिन सकिन्छ। सुलेमानले यस पुस्तकको सूत्रहरू समावेश गरेको थियो भने, कब्जा र वर्गीकृत राक्षस हुनेछन्। त्यसैले वास्तविकतामा। जॉन डीई अंग्रेजी रानी एलिजाबेथ आई को 16 शताब्दी मा एक सलाहकार थिए र पनि राक्षसहरुमा संलग्न भएको थियो। अंग्रेजी रानीको शीर्ष जासूस पनि थियो। हेनको पावर र नियन्त्रणको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले तिनीहरू राक्षसहरूसँग मद्दत लिन पनि प्रयास गर्छन्।
यो एक दया छ कि तिनीहरू राम्रो कुरासँग सम्बन्धित छैन। तिनीहरू साँच्चै ठगिएका छन् जसले मृत्युबाट डराउँछन्। खैर, यदि तपाइँ सबै कुरा नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, तपाईं पनि मृत्यु बाहिर आउनु चाहानुहुन्छ। तर दुर्भाग्यवश त्यहाँ उनीहरूको लागि सबैको लागि पनि छ।
7 जुलाई 2019 मा 12: 42
ईश्वरले यो अधिकार प्राप्त गरेका छन्, कुनै पनि सामान्य कार्यकारी समाजमा यो व्यक्ति बाटोबाट टाढा राखिएको छ। तर यो स्पष्ट रूपमा सम्पूर्ण प्रतिबिम्बित गर्दछ, यदि मैले भ्रष्टाचार वा भ्रष्टाचार (वोन ड्रेस लेइन) को लागी भ्रष्टाचार (Lagarde) को निन्दा गरे। यदि मेरो कामको मौका अत्यन्तै कम थियो, जब सम्म तपाई उच्च स्तरको ईयू चालक हुनुहुन्न, त्यसपछि यी क्षमताहरू जुन तपाईले चयन गर्नुभयो। जंकरजस्तै, ईयू युएईले ठगी गरे र रथलाई तिरस्कार गर्यो।
9 जुलाई 2019 मा 00: 05
सुपरमार्केट एडीडी अलब्रेच डिस्कको लागि खडा छ र यसो अल्ब्रेच र कार् अलब्रेच द्वारा स्थापित गरिएको थियो। अल्ड्रेको अल्ब्रेट्स जर्मनीको सबैभन्दा अमीर परिवार हो।
16 जुलाई 2019 मा 13: 52
यो लग रहेको छ कि वोन ड्रे लेन को एक युरोपेली सेना मा नाटो को संक्रमण को निगरानी र बढावा गर्न को लागी नियुक्त गरिएको छ। उनी बन्डेन्मिन्सिन्से डेरि वेरिइडिग्ङको रूपमा अघिल्लो स्थानमा अभ्यास गर्न सक्षम थिए।
« मान्छे कसरी 'जागरूकता' को बारे मा कुरा गर्न सक्छ र एकै समयमा प्रणाली को बनाए राखन को मदद गर्दछ?
तपाईको वरिपरी धेरै मानिसहरु को शाब्दिक सूक्ष्म (अञ्चल निकाय) हो? »
कुल भ्रमण: 12.978.861
किसानहरूको विरोध: किसानहरूले ध्यान दिए कि तपाईका विरोध नेताहरू गुप्त राज्य एजेन्टहरू छैनन्
विलुप्त हुने विद्रोह र उच्च करहरूको लागि कल र तपाईंको जीवनको प्रत्येक विवरणमा पूर्ण नियन्त्रण
टर्कीको आक्रामक सिरिया युरोपको लागि बन्दरगाह
पिटर वेस्टरहाउट op "वास्तविकता जब हामी यसलाई बुझ्छौं" किताब मार्टिन भ्रिजल्याण्ड अब उपलब्ध छ
SalmonInClick op किसानहरूको विरोध: किसानहरूले ध्यान दिए कि तपाईका विरोध नेताहरू गुप्त राज्य एजेन्टहरू छैनन्
Riffian op रुइनरवोल्ट ड्रेन्थे र उनको परिवार, अर्को मनोवैज्ञानिक अपरेसन (साइकोप) अधिक पुलिस राज्यतर्फ
तपाई किन यो जान्न चाहानुहुन्छ? op 5G खतरनाक छ र यो कसरी गोप्य रूपमा स्थापित छ
मार्टिन भिजल्याण्ड op रुइनरवोल्ट ड्रेन्थे र उनको परिवार, अर्को मनोवैज्ञानिक अपरेसन (साइकोप) अधिक पुलिस राज्यतर्फ
1.649 अन्य सदस्यहरू सामेल हुनुहोस्